Boolis ka Roma oo sameeyey dhacdo la yaab leh kadib markii laga soo wacay xaafad ku taal magaaladaas. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Boolis ka Roma oo sameeyey dhacdo la yaab leh kadib markii laga soo wacay xaafad ku taal magaaladaas.
Boolis ka Roma oo sameeyey dhacdo la yaab leh kadib markii laga soo wacay xaafad ku taal magaaladaas.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 8-08-16 6:27 PM Booliska Magaalada Roma ayaa loo yeeray xilli habeen ah dhamaadkii todobaadkii aynu kasoo gudubnay, kadib markii uu nin maqlay dhawac iyo qeylo ka yeertay guri deriskiisa (Jaarkiisa) ah.
Isla markiiba waxaa meesha soo gaaray 4 askari kuwaas oo si lama filaan ah ula kulmay Jole oo 84 Sanno jir ah iyo Seygeeda (Odeygeeda) Michele oo 94 sanno jir ah, Lababadan Lamaane gabowday ayaa isku dul oynayey.
Markii ay Askartii weydiiyeen waxa qaldan oo qeylada iyo ooyinta keenay ayey ku jawaabeen Lamaanayaasha isku dul gaboobay “Aniga oo daawanayo ayuu Ninkeyga igu yiri alla maxaan necbahay Wararka tirada badan”.
“Kadib markii uu hadalkaas igu yiri waan ooyey waayo waxaan jeclaa daawashada wararka” Ayey u sheegtay Haweeneyda cirowday.
Lamaanahan ayaa ahaa kuwa aan wax wehel ah heysan, marka ay Askartii yimaadeen oo ay arkeen xaalada heysata labadan qof ee isku dul gaboobay ayey dhoola cadeyn muujiyeen.
Mid kamid ah Askartii booqatay reerka ay ka dagan yihiin Roma labadan lamaane gabowday ayaa soo dhigay Boggiisa Facebook sawir uu ku muujinayo xaaladooda iyo sida ay isugu qanacsan yihiin waxa uuna dusha sare kaga hardhay sawiro ereyo ay kamid yihiin “Waa Lamaane mudan ku dayasho”.
“Cidna ma heystaan waa labo qof oo waaweyn misena ku nool hal hooy” ayaa lagu xusay wargeyska ugu carabka dheer dalka Talyaaniga.
Booliskii ayaa dirsaday gaari ambalaanse (Ambulance) si ay ugu kaxeeyaan xarunta lagu xanaaneeyo dadka da’da ah.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in labadan waayeel ee wada dagan magaalada Maafiyada ay soo wada noolaayeen muddo 74 sannadood, waxa ayna doonayaan iney noloshooda sii wataan oo aysan kala harin.